कोस्टारिकामा विद्युत परियोजना निरीक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री ओली – मुलधार न्युज
Home > समाचार > कोस्टारिकामा विद्युत परियोजना निरीक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री ओली
कोस्टारिकामा विद्युत परियोजना निरीक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री ओली
१५ आश्विन २०७५, सोमबार १३:२१
काठमाडौं-दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज त्यहाँको विद्युत उर्जा सम्बन्धी परियोजनाको अवलोकन गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोस्टारिकाको लस सान्तोस, इओलिका पार्कस्थित पिरिस जलविद्युत संयन्त्र निरीक्षण गरेका हुन्।
इओलिक पार्कमाप्रधानमन्त्री ओलीलाई संयन्त्रका प्रमुख इञ्जिनीयर जर्मन युरेना, डिबी एरियासले स्वागत गर्नुका साथै संयन्त्रका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
यसैगरी ‘कोस्टारिकन इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन’ आइसीइका निर्देशक रोबेर्तो किरोसले सो परियोजनाका अन्य पक्षका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
कोस्टारिकाको ऊर्जा उत्पादनको ९८.१ प्रतिशत भाग नवीकरणीय ऊर्जाले ढाकेको छ। यीमध्ये पनि ८० प्रतिशत ऊर्जा जलविद्युत््बाट प्राप्त हुन्छ।
यस मुलुकमा सामान्यतया हरेक वर्ष करीब ७५ दिन उर्जाको मागको १०० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाले पूर्ति गर्छ। आइसीइले पानी, पृथ्वीको ताप, हावा, सूर्य र जैविक इन्धनका आधारमा ऊर्जा उत्पादन गर्छ।
उल्लेखित संस्थाले सहायक ब्याकअपका लागि मात्र हाइड्रोकार्बन ऊर्जा उपयोग गर्ने गर्छ। आइसीईको सबैभन्दा ठूलो परियोजना राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आरेनल, काची, आङ्गोस्तुरा, पिरिस तथा रेभेन्ताजोन गरी चारवटा जलविद्युत् परियोजना छन् जसमा जलाशयसमेत छ।
यसैगरी पृथ्वीको तापका आधारमा मिराभालेस जियोथर्मल तथा लास पाइलास जियोथर्मल प्लान्ट गरी दुई परियोजना पनि यस संस्था अन्तर्गत छन्।
आइसीइअन्तर्गत वायु ऊर्जा प्रणाली पनि छन् । यस संस्थाको क्यान बाग्यासे आयोमास ऊर्जा संयन्त्र कोस्टारिकाको उत्तरपश्चिमी भागमा अवस्थित छ।
कोस्टारिकामा आईसीईले कुल उर्जाको ७०.२७ प्रतिशत उत्पादन गर्छ भने व्यापारिक समुदायले १०.२५ प्रतिशत, निजी क्षेत्रले ९.२९ प्रतिशत र ‘बनाउ, सञ्चालन गर हस्तान्तरण गर’ बुट प्रणालीमा १०.१८ प्रतिशत उत्पादन गर्छन्।
कोस्टारिकाले गुआटेमाला देखि एल साल्भाडोर, होन्डुरस, निकारागुवा भएर पानामासम्म विद्युतऊर्जा विक्री गर्छ र यसका लागि उनीहरूबीच विद्युत वितरण प्रणाली छ।
पिरिस जलविद्युत् संयन्त्रले १३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छ र यो पिरिस नदीमा आधारित बाँधयुक्त जलविद्युत् परियोजना हो।
कोस्टारिकाको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता तीन हजार ३९ मेगावाट रहेको अनुमान गरिएको छ। सन् २०१४ मा यस मुलुकले दुई हजार ७३२ मेगावाट उत्पादन गर्नसक्ने संयन्त्र स्थापना गरिसकेको छ। यस मुलुकको ऊर्जाको अर्को स्रोत भनेको भौगर्भिक ताप उर्जा हो।
विप्लव समुहका जिल्ला कमिटी सदस्य राई पक्राउ
कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका दुई उप–रजिस्टार अख्तियारको फन्दामा
निर्मला हत्या प्रकरणः उच्चस्तरीय टोलीद्धारा छानबिन शुरु
उपत्यकाबाहिरका विश्वविद्यालयको काठमाडौं सम्पर्क कार्यालय खारेज !
निर्मला हत्या प्रकरणः डिएसपीसहित पाँच पक्राउ
काठमाडौंको गोंगबुबाटअपहरणमा परेका बालकको हत्या
स्वयम्भूको जंगलमा एक युवकको किन गर्धन काटियो?
पोल्याण्डले राख्यो नेपालसँग संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव
राष्ट्रिय टोलीमा छनोट : सपनाको आधा यात्रा